China igumbi lokuhlala elisongekayo lokuqina kwengane ekhuphuka ekwenziweni naseFektri | I-Tianzhihui
Igumbi Lamagwebu Mat
Igumbi lokuhlala elisongekayo ukuqina kwengane ekhuphukayo
I-XPE Izingane zidlala umata, ukuqina okuphezulu, amandla aphezulu, ukubuyela okuhle okuhle, ukusebenza okuhle kakhulu kokuqinisa. imikhiqizo lithunyelwa eYurophu, eJapane, eRussia, eningizimu-mpumalanga ye-Asia nakwamanye amazwe unyaka wonke. Imikhiqizo iqinisekiswe yi-European Union SGS namazinga okuphepha e-3C.
Igama lokukhiqiza: Izingane zidlala umata
Ubude obujwayelekile nezinga: 1.8m, 2.0m noma ngezifiso
Ukujiya Standard: 8mm, 10mm, 15mm, 20mm noma ngezifiso
Ukupakisha: Isikhwama, ibhokisi lesipho eliphathekayo
Isici: Anti-ukushelelaEco-friendly, Manzi, Corrosion- Resistant, umbimbi- Resistant, Anti-, Nokunwebeka
Isicelo: Izingane, Ojahidada, Igumbi Lentsana kanye Nejimu Yokuzivocavoca YaseYadini
I-XPE iyinto enobungani bemvelo. Uma kuqhathaniswa ne-EPE, i-XPE inokuqina okuphezulu, ukuqina okuhle, nokuphepha okuphezulu. Ngeke isilimaze isikhumba sethenda sengane. Ngaphezu kwalokho, umugqa wokukhasa we-XPE unokuqina okuhle, amandla okuqina aphezulu, nokuqina okwengeziwe.
Igama Igumbi lokuhlala elisongekayo ukuqina kwengane ekhuphukayo
Isitayela Izinketho ezahlukahlukene
Usayizi Osayizi abaningi bayatholakala
Izici Non-Toxic, Manzi, Washable, Luhlala Isikhathi Eside, Non-Slip, Ukhululekile
Izitifiketi EN71-3, CE, Sedex
Uhlangothi A: IBhele elincane ligibela ibhayisikili Uhlangothi B: linganisa ubude
Uhlangothi A: Izilwane Namanani Uhlangothi B: linganisa ubude
Uhlangothi A: Ukuhamba ngebhayisikili kuthrekhi Uhlangothi B: UKoala omncane
Uhlangothi A: ICoala Side B: Little Pegasus
Uhlangothi A: Bear Balloon Uhlangothi B: Izilwane Nezinombolo
Ngemuva kokuklanywa okuphindiwe, ukubukeka kulula kakhulu futhi kunhle
Iphephile futhi ayinambitheki, abesifazane abakhulelwe / asebekhulile / izingane bangayisebenzisa ngokuzethemba.
Ubukhulu obuhlukahlukene ongakhetha kubo
Ukuvimba ukushisa nokunganamatheli kubantu ehlobo
Hlala kude namakhaza nomswakama ebusika
Imigqa yokulwa nesiliphu, ingane ikhasa ngaphandle kokushelela: ukuthungwa kuhlelwe ngokulinganayo ebusweni bomata, nonyawo alushelelezi
Kulula ukuyihlanza, ukungcola sekuphele ngokusula okukodwa: ingaphezulu alinamanzi futhi alinamabala, amabala obisi namabala omchamo ngeke anciphise, kunciphise ukukhula kwamagciwane.
Amaphethini ahlukene ezinhlangothini zombili, ucezu olulodwa lwezingcezu ezimbili eziphezulu. iphethini iphrintwe kungqimba lwangaphakathi lefilimu le-matte, eliphephe ngaphandle kokuthintana ngqo nesikhumba sengane.
Isitifiketi sokuhlola inhlangano egunyaziwe siqinisekiswa kakhulu
I-Xpe crawling mat iyikhwalithi engcono yokukhasa. Imvelo futhi enobuthi. Igwebu le-PE, elinobungani bemvelo, elingenabuthi, elingelona iphunga, okwamanje libonwa njengezinto ezinobungani bemvelo emhlabeni; ngeke kubangele imiphumela emibi esikhumbeni sethenda lengane
Langaphambilini I-B6-PLUS Ikhaya le-multifunctional Folding Treadmill
Olandelayo: Amasethi ayi-11 wokuqina kwentambo yokudonsa intambo yokudonsa
Gym iraba ikhoyili EPDM ikhoyili umdanso phansi iraba nu ...
Isitolo esidayisa yonke impahla orange leaf iphethini eva foam phansi mat
I-Yoga Mat Enethawula Phezulu, Isikhwama seYoga Mat sokuhamba, Isikhwama Sokuhamba seYoga, Isikhwama se-Yoga Sling, I-Thick Flooring Puzzle Ukuzivocavoca Mat, iphazili yokuzivocavoca mat,